साञ्जेन र रसुवागढीको आईपीओ बिहीवार बाँडफाँट, आवेदकले कति पाउने भए त शेयर ? | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर साञ्जेन र रसुवागढीको आईपीओ बिहीवार बाँडफाँट, आवेदकले कति पाउने भए त शेयर ?
on: May 01, 2019 मुख्य खबर, लगानी
साञ्जेन र रसुवागढीको आईपीओ बिहीवार बाँडफाँट, आवेदकले कति पाउने भए त शेयर ?
वैशाख १८, काठमाडौं (अस) । साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ बिहीवार बाँडफाँट हुँदैछ । दुवै कम्पनीको आईपीओ दिनको ३ बजे उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सभाहलमा बाँडफाँट हुने जानकारी साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीको विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले दिएको हो । उक्त कार्यक्रममा ऊर्जा, सिचाई तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन पनि सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समेटिएका साञ्जेन र रसुवागढीको आईपीओ पनि ऊर्जा मन्त्री पुनको उपस्थितिमा बाँडफाँट हुने भएको हो । यसअघि जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतको शेयर त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले विक्री गरेको थियो ।
दुवै आयोजनाको शेयरमा आवेदन दिने जति सबै लगानीकर्ताले शेयर पाउने भएका छन् । रसुवागढी हाइड्रोपावरमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ५० कित्ता शेयर पाउने भएका छन् भने सान्जेन जलविद्युतको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ३० कित्तासम्म पाउने छन् ।
नागरिक लगानीकोषका अनुसार सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा ३ लाख ४ हजार जनाले १ करोड ४१ लाख कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । साञ्जेनले कुल ५४ लाख ७५ हजार कित्तामध्ये २ लाख १९ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र २ लाख ७३ हजार ७५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी ४९ लाख ८२ हजार २५० कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरेको होे । यसमा मागभन्दा २ दशमलव ८३ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
त्यस्तै, कुल १ करोड २ लाख ६३ हजार १५० कित्ता शेयर मध्ये ४ लाख १० हजार ५२६ कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ५ लाख १३ हजार १५७ कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि छुट्याइ बाँकी ९३ लाख ३९ हजार ४६७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि विक्री गरेको रसुवागढीको आईपीओमा १ दशमलव ८३ गुणा बढी आवेदन परेको छ । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार १ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५१० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार रसुवागढीको आईपीओमा ३ लाख २ हजार ५३२ जनाले १ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५१० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
मन्त्रीको काम छैन के हो, सबै शेयर कार्यकर्ता लाइ मात्र पर्ला बाकी रहल पहल मात्र जनताले पाउलान !!! होस् गरौ यस्तो काममा राजनीति नेता मन्त्रि बहिस्कार गरौ !!!!
सान्जेन जलविद्युतको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ३० कित्तासम्म पाउने छन्
इन्फिनिटीको आईपीओ बाँडफाँट, १० कित्ता पाउने कति जना ?
मागभन्दा २२.८० गुणा बढी आवेदन परेको गुँरास लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट बिहीवार
मागभन्दा २२.८० गुणा बढी आवेदन परेको गुराँस लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट यसै साता